Magaalaa Buraayyuutti aartistoota Oromoo maaltu mudate? - BBC News Afaan Oromoo
Guyyaa kaleessaa jechuun Sanbata gaafa 15.02. 2020 gareen aartistootaa Oromoo eebba hoteelaa irratti hirmaachuuf gara magaalaa Buraayyuu imalan humnoota nageenyaatiin reebamuu BBC'tti himan.
Namoota reebaman keessaa tokko kan taatee fi yeroo ammaa Hospitaala Hayat kan magaalaa Finfinneetti argamutti wal'aansa argachaa kan jirtu Hawwii H. Qananii, intalli aartisti Ilfinash Qannoo, mataa fi harka isheerra miidhaan ga'uu dubbatti.
''Shimalaan mataa keessa na reeban. Shimalli mataa na waraanee baay'ee na dhiigaa ture. Amma hospitaalatti shimala mataa kiyya keessatti caccabe na keessaa baasaa jiru. Mataan kiyya baay'ee na dhiigaa ture. Harki kiyyas na cabeera,'' jechuun waan ishee mudate kan dubbatte aartist Hawwiin.
Na reebanii lafarra na gotatanii bakkeetti na gatan kan jettu aartist Hawwiin, ''Akka hiriyoonni kiyyallee lafaa na kaasanii mana yaalaatti na hin geessineef nama narraa ittisaa turan,'' jetti.
''Dhumarratti wayita isaan na gatanii deeman namni wayii karaarraa na fuudhee kilinika dhiyoo jirutti na geesse. Baay'ee dhiigaa waanan tureef kilinika sanatti yaalamuu hin dandeenye. Kanaafuu gara Hospitaala Hayaatitti na dabarsan. Amma wal'aansa argadhee fooyyee qaba,'' jetti aartist Hawwiin.
Jalqabi rakkoo wayita humnoonni nageenyaa dargaggoota sirna eebba hoteelaa irratti argaman reebuu eegalaniidha kan jettu aartist Hawwiin, ''Poolisoonni bakka nutti jirrutti dhufanii dargaggoota reebuu eegalan. Sirba waa'ee ABO faarsuun maaliif shubbistu jedhanii nama reebuu eegalan.''
''Isa booda waahilli koo weellisaa Dassaalenyi Beekamaa hin reebinaa jedhee poolisoota dhorkuuf yaaluulleen isallee garmalee reeban. Wayitan maaliif reebdu jedhee gaafadhu anas baay'atanii na qabanii na reeban,'' jetti.
Weellisaa Dassaalenyi haala keessa jiru gaafachuf bilbillee wal'aansarra akka jiruu fi dubbachuu akka hin dandeenye BBC'tti himeera.
Image copyright Waajjira Dhimmoota Komikieeshinii Magaala Buraayyu
Bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti Inispektara Itti Aanaa kan ta'an Anuwaar Huseen magaalaasaanii keessatti eebba hoteelaarratti rakkoon akkanaa mudachuun dhugaa ta'uu mirkaneessanii rakkoon waldhibdee filannoo sirbaarratti uumamee tureen dhalate jedhan.
''Eebba hoteelichaarratti wayita sirboonni dhiyaataa turanitti filannoo sirbaarratti gareen lama uumamee ture. Garee kanatu walitti bu'e. Isa booda qaamni nageenya nageenya eegsisuuf deeme,'' jechuun BBC'tti himan.
Komiin aartistootaa garuu sirba ABO fi WBO faarsutu dhiyaate jedhamuun akka reebamaniidha, kanarratti yaada maal akka qaban gaafanneef, ''Kun waan booda adda ba'uudha. Garuu rmaddi rakkoo kana natti hin fakkaatu'' jedhan.
Akkasumas Bulchiinsi Magaalaa Buraayyuu fuula feesbuukii isaarratti barreeffama maxxanseen, rakkoon kan mudate Ganda Gafarsaa Naannoo Tsaraha Tshiyoon jedhamutti eebba Hoteela Obbo Addisuu Balaay irratti ta'uu eere.
Eebba hoteela kanaarratti aartistoota dabalatee namoonni bebbeekamoo hedduun argamuu kan ibse bulchiinsi magaalaa Buraayyuu, walitti bu'iinsa garee hirmaattota sagantichaa gidduutti uumameen miidhaan qaqqabuu ibseera.
Miidhaan kan irra ga'e weellistuu Hawwii H. Qananii battaluma mana yaalaa geeffamuun wal'aansa argatteetti jedha Bulchiinsi Magaalaa Buraayyuu.
Sababa walitti bu'iinsaa kanaan namni to'atamee tokkollee hin jirus jedheera.
Boombiin Poolisii Oromiyaarratti Buraayyutti darbatame ‘lubbuu isaaniif hin yaaddessu’ jedhame
Gabaasni lakkoofsa namoota Buraayyuurraa buqqa'anii turan maaliif waldarbe?